Dowladda Somalia oo War kasoo saartay dib u dhaca Shirka Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo la hadlay Warbaahinta ayaa faah faahin guud ka bixiyey shirka wada-tashiga magaalada Dhuusamareeb iyo dib u dhaca xalay ku yimid.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay daalanaayeen labada hoggaamiye ee Jubbaland iyo Puntland oo shalay gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, isla markaana ay dalbadeen in dib loo dhigo Shirka.
Sidoo kale Wasiirka warfaafinta ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in shirka uu si rasmi ah u furmi doono saacadaha soo socoda, islamarkaana laga wada-hadli doono doorashooyinka.
Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay is-dajiyaan, kuna kalsoonaadaan madaxda Soomaaliyeed ee haatan ku sugan caasimada Galmudug, isla markaana natijo wanaagsan ay kasoo bixi doonto.